'पोकेमोन गो' कसरी खेल्ने ? - Living with ICT
Home / Featured / ‘पोकेमोन गो’ कसरी खेल्ने ?
‘पोकेमोन गो’ कसरी खेल्ने ?
Admin Feb 25, 2017	Leaveacomment
२०१६ को ग्लोबल फेनोमेननका रूपमा चर्चित रहेको गेम पोकेमोन गो ढिलै भएपनि नेपालका लागि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ । विश्व प्रख्यात लोकेसनमा आधारित आर्गुमेन्टेड रियालिटी गेम पोकेमोन गो नेपाल लागायत दक्षिण एसियाली मूलूकहरूलाई लक्षित गरि डिसेम्बरको १४ तारिख सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपाल लगायत भारत, पाकिस्तान भूटान, बङ्लादेश र श्रीलंकामा यो गेम पछिल्ला समय सार्वजनिक गरिएको हो यो गेम चर्चित कार्टुन सिरिज पोकेमोनमा आधारित छ ।
यस गेमलाई द पोकेमोन कम्पनीसँगको सहकार्यमा नियान्टिकले बिकास गरेको हो । २०१६ को जुलाईमा सार्वजनिक भएको यस गेम केही मूलकहरूका लागि मात्र उपलब्ध भएको थियो । यस खेलप्रति क्रेज बढेसँगै यस गेमलाई नेपालमा समेत अनधिकृत डाउनलोड गरि खेलिएको थियो ।
यस अनाधिकृत डाउनलोडलाई रोक्नका लागि यस अघि नियान्टिकले गेम रिलिज नगरेका देशहरूलाई जियो ब्लक गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न पोकेस्टप, जिम हल र पोकेमोनहरू स्वत हटेको थियो भने गेम निष्क्रय जस्तै बन्न पुगेको थियो ।
यो गेम जिपियस लोकेसनमा आधारित गेम हो । यसतो किसिमको लोकेसनमा आधारित आर्गुमेन्टे रियालिटी गेम यस अघि कहिल्यै खेलिएको थिएन । यस गेम भित्र रहेको क्यारेक्टर हिड्न, कुद्न वा अन्य क्रियाकलाप गर्न प्रयोगकर्ता स्वयम् हिड्नपर्ने वा कुद्नुपर्ने हुन्छ । यो अद्भूत फिचर गेम प्रेमीहरूका लागि बिल्कूलै नयाँ अनुभब बनेको छ । गेम खेल्न इन्टरनेट र जिपिएस लोकेसन इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र पोकेमोन खोज्न र पक्रन आफैँ हिड्नु पर्ने हुन्छ ।
उक्त गेममा पोकेमोन ट्रेनरहरूले पोकेमोन पक्रने, खोज्ने र पोकेमोनबिच ब्याटल गर्न सक्नेछन । पोकेमोन बिचको ब्याटल गर्नका लागि गेम भित्र तोकिएका जिम हलमा जानुपर्ने छ र त्यहाँ आफ्नो पोकेमोनलाई प्रयोग गरेर अर्को प्रयोगकर्ताको पोकेमनसँग ब्याटल गर्न सकिनेछ ।
सार्वजनिक भएको छोटो समयमै विश्वविख्यात हुनका साथै २०१६ को सबैभन्दा बढि नाफा कमाउन सक्ने गेम हो पोकेमोन गो । नेपालमा पनि यो गेमलाई धेरै नै चासोका साथ हेरिएको छ ।
यस गेम सुरूमा सार्वजनिक गरेको झण्डै ५ महिना पछि नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि सार्वजनिक गरिएको हो । यस गेमलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ । यो गेम एन्ड्रोइड ४.२ किटक्याट भन्दा माथिका अपरेटिङ सिस्टममा मात्र चल्ने नियान्टिकले जनाएको छ ।
pokemon pokemon game in nepal 2017-02-25
Previous नेपालमा नेट न्युट्रालिटी, सुरू भयाे बहस
Next विपीन (भस्मे)को टेक्नो लाइफस्टाइल